Ikhaya laseNtabeni ngaphansi kwegquma le-ski, ukubukwa, indawo, ukunethezeka
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Clayton
Ikhaya lezintaba elibanzi elinokubukwa: Hamba ngebhayisikili noma uphume ngomnyango ongaphambili uye ezindleleni ezisezingeni lomhlaba zikaFernie, imifula, nokudoba. Ukushayela imizuzu emi-4 noma ibhayisikili eliyimizuzu engu-8 ukuya edolobheni laseFernie noma egqumeni le-ski. Iyunithi evuselelwe, ethule phezulu yaphansi enentofontofo (AC, indawo yomlilo, ama-recliner, i-TV, i-wifi). Izici zifaka i-loft ebanzi negumbi langaphambili lomqondo ovulekile kanye nekhishi eligcwele. Idekhi inikezela ngobuhle be-ski hill, i-Mt. Fernie kanye nokubukwa kwe-Three Sisters, izihlalo zesimanje ze-patio kanye ne-BBQ engagqwali. Indawo yokudlela eyi-Phenomenal Indian kwamakhelwane.
Usilingi onamapulangwe, amaphansi okhuni oluqinile, kanye nokubukwa kwentaba ye-panorama ngaphandle kwefasitela nedekhi kwenza lokhu kube indawo ekahle yokushushuluza, ibhayisikili, noma iholide. Ngomklamo wesimanje ovulekile kanye nelogi ye-rustic uzizwa usekhaya ukuze uhambe entabeni. Lena iyunithi yezinga eliphezulu, ngakho izihambeli kufanele zikhuphuke izitebhisi (~ izinyathelo ezingu-20) ukuze zifinyelele-ukuzivocavoca okuhle kakhulu! Lolu phiko luphinde luhlanganyele izindonga nomakhelwane, abathule nabahloniphayo. Uma unemibuzo noma izinkathazo xhumana nathi 24/7 ku-AirBnB. Jabulela ukuhlala kwakho!
Ngohlelo lokushushuluza olusezingeni lomhlaba luka-Fernie, ukuhamba ngebhayisikili, ukudoba, kanye nesistimu ye-trail ngaphandle komnyango akudingekile ukuba uhambe ibanga elide ukuze ujabulele u-Fernie. Izinketho zokudlela zifaka phakathi ukuhamba ngokushesha kwemizuzu emi-4 noma ibhayisikili eliyimizuzu engu-8 ukuya edolobheni lomlando laseFernie, noma ujabulele ukudla okumangalisayo kwama-Indian eduze kwakho.
Sisebenzisana ne-RockiesDirect ukuze sikunikeze ukwesekwa kwezihambeli zendawo ezingu-24/7 ngesikhathi sokuhlala kwakho!
UClayton Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$239.
Hlola ezinye izinketho ezise- Fernie namaphethelo